I-china PVC indwangu yemvula yemvula, indwangu yobufakazi bemvula ye-PE, ifektri lekhava yeloli nabakhiqizi | Boda
Indwangu engangeni imvula isetshenziselwa kakhulu ukumboza izimpahla nokuhamba emikhakheni efana nezimoto, imikhumbi, izimboni nezimayini. Inezici zokumelana nelanga, ukumelana nesithwathwa, ukulwa nokuguga, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane, ukusonga nokuqina.
Izinto: i-polypropylene noma i-polyethylene density: 9 × 9 kuye ku-14 × 14 ububanzi: 1.65m kuya ku-12m
Ngokuya ngezidingo zamakhasimende:
Isisindo: 60 kuya ku-360gsm
Ohlangothini Double manzi, amakhona amane emphethweni olulodwa onqenqemeni ukushisa uphawu; intambo eceleni konqenqemeni lomsebenzi ongaguquguquki, wezimoto zokungcebeleka, amaloli, imikhumbi, izindawo zokwakha, izinkuni zokubasa, kepha futhi kubandakanya amaloli, izinqola, imishini, umhlabathi, ukutakulwa kwezimo eziphuthumayo, ukudweba, njll. Umkhiqizo unezinzuzo zokungenwa ngamanzi, ubufakazi obubandayo, i-sunscreen, anti-ukuguga, ukumelana ne-UV, ukuqina, ukumelana nengcindezi, ukumelana kokugoqa, ukumelana nokugqwala, ukuthwala, izinzuzo zokonga nezisebenzayo. Imikhiqizo ilungele ukugcinwa, ukwakhiwa, amatende ahlukahlukene, amajazi wezikhali, amafektri namabhizinisi ezimayini, amachweba, amachweba, izindlu zokugcina izithombo ezahlukahlukene, izimoto, imikhumbi, izindiza nezinye izindlela zokuhamba futhi izimpahla ezivulekile zimboza zivikele.
Isingeniso somkhiqizo wendwangu yemvula ye-PVC: uqweqwe oluhlaza olujiyile, owaziwa nangokuthi i-PVC tarpaulin, egcwele amandla amakhulu we-polyester canvas, ehlanganiswe ne-polyvinyl chloride (PVC) yokunamathisela i-resin, engeza i-accelerator, isikhutha inhibitor, i-anti-aging agent, i-anti-static agent nokunye izithasiselo zamakhemikhali, ifakwe ipulasitiki ekushiseni okuphezulu. Ngobufakazi obungenamanzi, isikhutha, ukumelana nokubanda, ukumelana nokuguga, anti-static nezinye izakhiwo, kungacutshungulwa ngosayizi abahlukahlukene kanye namamodeli ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Lapho kusetshenzwa, izinhlangothi ezine zendwangu kawoyela zonke zisongwe, amakhona amane nezinhlangothi ezine zicindezelwe izinkinobho, futhi zonke izandla zikhululekile
Izici zendwangu engangenisi imvula ye-PVC namaphoyinti wokunakwa asetshenziswayo:
1. Inemisebenzi yokungangenwa ngamanzi, ukuvimbela imvula, ukuvikela ilanga, ubufakazi besikhunta, ukuqina, ukusonga kanye nesimo sezulu, futhi inezici zokumelana ne-acid ne-alkali, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuwasha nokugoqwa okulula.
2. Lo mkhiqizo kufanele ugweme amathuluzi abukhali ensimbi asetshenziswayo
Sebenzisa nolwazi lokulungisa lendwangu ye-PVC engangenisi imvula:
1. Uma kusetshenziswa i-PVC tarpaulin, kufanele igwenywe ukuklwebha indwangu ngamathuluzi abukhali, okuzoholela ekwehleni kokusebenza kwendwangu okungangenwa ngamanzi.
2. Ngemuva kokusetshenziswa koseyili we-PVC, kufanele ivulwe, yomiswe futhi ihlanganiswe ukuze isetshenziswe futhi.
3. Lapho ososeyili be-PVC bembekwa futhi begcinwa, kufanele bavikeleke kumswakama namagundane. Kufanele zomiswe njalo ngokusho komswakama wendawo kanye nesimo sezulu.
4. Ngesikhathi sokuhanjiswa kukaseyili we-PVC, umbutho kufanele ube ngangokunokwenzeka kakhulu ukuvimbela iphakethe langaphandle ukuba lonakaliswe futhi umgoqo wokuvikela ungadabulwa ngamandla amakhulu.
5. Iseyili ye-PVC ngokuvamile ayicimi umlilo, ngakho-ke kufanele ibekwe kude nomthombo womlilo lapho isetshenziswa, ikakhulukazi lapho igcinwa.
6. Lapho kuvulwa i-PVC tarpaulin, kuyadingeka ukuthi kugwenywe ukonakala kukakhonkolo odalwa ukudonsa phansi.
7. Ngaphambi kokuba kuvulwe i-PVC tarpaulin, kufanele kubhekwe phansi ukuze kususwe izinto ezibukhali ukuvimbela ukulimala kwendwangu ebusweni bendwangu yokuhlukanisa.
Ngokuvamile, indwangu yenziwe nge-polypropylene noma i-polyethylene. Indwangu yemvula uhlobo lwendwangu enomsebenzi wokusebenza kwemvula.
I-BOSENDA inikeza uchungechunge lwekhava lokufaka indwangu / amanzi elingenamanzi ngemininingwane ephelele, ukuthola eminye imininingwane, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini Umshini wokushisela, umshini wokushisela we-DC, umshini wokushisela we-AC, imaski yokushisela, izinsimbi zokushisela
Olandelayo: Ingidi, ingidi yethusi elingisa, insimbi engagqwali, ilokhi yamaqabunga, ilokhi yokulwa nokweba, ukukhiya kwephasiwedi, ukukhiya izigxivizo zeminwe namanye amadlambi
Indwangu yobufakazi bePe Rain
PVC Imvula Ubufakazi Indwangu
Indwangu Yobufakazi Bemvula
Indwangu Engangenwa Manzi
Umshini wokushisela, umshini wokushisela we-DC, i-AC welding ...
Twist sokuprakthiza, engagqwali sokuprakthiza kancane, steel d ...
Iteyipu kagesi, iteyipu yomlilo osekelayo, i-PV ...
Isibhamu seglue esishisayo, isibhamu seglue iron glue, esishisayo ...